अब कलियुगको कति समय बाँकी ? त्यसपछि के हुन्छ ? यसो भन्छ धर्मशास्त्रले ! – Medianp
अब कलियुगको कति समय बाँकी ? त्यसपछि के हुन्छ ? यसो भन्छ धर्मशास्त्रले !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २६, २०७५१४:१९0
काठमाडौँ । धर्मशास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रहेका छन् । ती हनु सत्य युग, द्धापर युग, त्रेता युग र कलियुग । यी चार मध्ये अन्तिममा रहेको युग हो कलि युग । यो युगमा रहेका मानिसले चरित्र बिगार्ने सभ्यताको नाममा संस्कारहरु बिगार्ने गर्छन् भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
द्धापर युगको अन्त्यपछि शुरु भएको युग नै कलि युग हो । अब कलियुगको अन्य भएपछि संसार ध्वस्त भएर नयाँ संसारको सृजना हुन्छ भन्ने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । कलि युग ४ लाख ३२ हजार वर्षको हुने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ । सत्य युगको आयु १७ लाख २८ हजार वर्ष रहेको थियो । त्रेता युग चाहि दुई चरणमा थियो । त्यसको आयु १२ लाख ९६ हजार वर्ष भएको बताइएको छ । तेस्रोमा द्धापर युग को आयु ८ लाख ६४ हजार वर्ष रहको धार्मिक विश्वास रहेको छ । शास्त्रमा कलिय युगको यसरी गरिएको छ व्याख्या ।
कलियुगको आरम्भ : कलियुग चौथो युग हो । यसको आयु १२ सय वर्ष हुन्छ । महाभातर युद्ध ३१३७ ईसा पूर्वम भएको थियो । कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षमा देहान्त भएको थियो । त्यसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास गरिएको छ । यो युगलाई भगवान विष्णुको दशौँ अवतारको रुपमा उल्लेख गरिन्छ । कल्किको प्रभाव रहेको विष्णु पुराणमा बताइएको छ ।
यस्तो छ कल्कि अवतारको कथा : कल्किको रुपमा विष्णु भगवान कलियुगको अन्तिममा उपस्थित भएको कुरा धर्म ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । कल्कि अवतार कलियुग र सत्ययुगको संधिकालमा हुनेछ । कल्कि पुराणको अनुसार विष्णुको यो अवतारलाई ६४ औँ कला मानिएको छ । विष्णुको अवतार गरेर कल्किले देवदत्त नाम गरेको घोडामा चढेर संसारबाट पापीहरुको विनाश गर्नुभएको र धर्मको पुन स्थापना गरेपछि कलियुगको अन्य हुने र फेरि सत्य युग सुरु हुनेछ ।
सिन्धुलीमा चट्याङ लागेर दुई घाइते
पूर्वी चितवनको सौराहामा १३ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गर्ने दुई जना प्रहरीको खोरमा